Yeroo qilleensaa dhabbilee amantiileef kenname laalchisee ibsa Gumiin Waaqeffannaa Addunyaa baase – Awash Times
April 7, 2020 Malka Wabe Uncategorized Leave a comment
Waajjira Ministeera aadaaf Tuurizimii Itiyophiyaa
Waajjira Dhaabbata Dhimma Amantiilee Itiyoophiyaa
Dhimma: Yeroo qilleensaa dhabbilee amantiileef kenname laallata
Xalayaan guyyaa 05.04.2020 Dhaabbata Dhimma Amantiilee Itiyoophiyaa irraa bahe amantiileen biyyattii keessa jiran karaa miidiyaa ummataa tajaajila barumsaa akka kennan akeeka. Xalayaa kana irraa akka hubatamutti amantiileen Itoophiyaa keessa jiran yeroo ramadameef keessatti haala dhukkuba koronaa kana waliin walqabateen hojii barsiisummaa fi lallabaa akka gaggeessan akeeka.
Kun hojii boonsaa fi tarkaanfii gaariidha. Aamantiileen kamuu yeroo balaan biyya mudatetti dirqama addaa qabu. Dirqamni addaa kun lammiilee biyyaa barsiisuu, jajjabeessuu, tasgabbeessuu fi karaa qabsiisuudha. Dirqama kana akka bahataniif, yeroon qilleensaa qoodamuufiin waan qajeelaa fi sirrii waan ta’eef, hedduu dinqisiifanna.
Haata’uutii, xalayaa kana irraa waanti hubanne tokko hedduu nu gaddisisee jira. Kunis, yeroo hamtuu kana keessatti amanitiin Waaqeffannaa akka dirqamicha hin bahanneef dhiibamuu isaati. Xalayichi dhaabbileen amantii Itiyophiyaa keessa jiran marti, miidiyaa biyyattiin qabdu 4 (EBC, Addis Tv, Fana fi Walta) irratti torbee keessatti guyyoota hedduu sa’aan kennameefii akka jiru ibsa. Kun garuu amantii Waaqeffannaa hindabalanne. Waaqeffannaafis gabateen yeroo barsiisaa kenname hinjiru. Kun ummata Waaqeffannaa hordofan moggaatti dhiisuu, Waaqeffannaa irratti loogii barootaaf ture amma illee aadessanii itti fufuu agarsiisa.
Akka amantaa Gumii Waaqeffannaa Addunyaatti, cunqursaa fi loogiin biyya Itoophiyaa keessa ture, qabsoo ummataan buqqa’eera. Garuu, loogiin sirna biyyattii keessa hidda dhofkate, hiree eeggatee akkuma yeroo hundaa baratame, dhiibbaa gochaa jira. Kunimmoo, akka Heeraa fi Seera Itiyophiyaatti fudhatama hin qabu. Heerrii fi seerri Itoophiyaa amantiileen hunduu walqixa ta’uu mirkaneessa.
Yeroo adda addaattis, hordoftoonni Waaqeffannaa, Ujuba (iddoo awwaalchaa) dhabuudhan biyya san keessatti salphifamaa jiran. Kun immoo akka ammallee dhaabbilee amantii biroo irraa maallaqaan ujuba bitatanii tajaajilaman isaan dirqisiisaa jira. Haala kanas Waldaan keenya kanan dura Waajjira Muummicha Ministeeraatti xalayaadhan iyyatee turullee deebii hinarganne.
Gumiin Waaqeffannaa Addunyyaa rakkooleen namaan uumaman, namaan akka hiikamanitti amana. Rakkoolee hiikuuf yaada qajeelaa fi ayyaana araaraan guutamuun qaama hundaaf barbaachisaadha. Kanaaf, Waaqeffannaan akkamu amantiilee kamuu kabajaa fi ulfina akka argatu jabeessinee gaafanna. Duula koronaa ittisuu keessattis Waaqeffannaan qooda akka bahatuuf yeroon qilleensaa loogii tokko malee akka kannamuuf irra deebinee gaafanna. Qaamni mootummaas dhimmicha laalee yeroo gabaabaa keessatti akka sirreessu maqaa Waaqeffattootatiin kabajaan gaafanna.
Kabajaa fi Marabbaan Uumaa fi Uumama Hundaaf Haata’u!!
Asnaaqaa T Irkoo
Gumii Waaqeffaannaa Addunyaa
International Oromo Inter-faith Network
Previous Post: Murtiilee fi Ibsa Ejjennoo Gamtaa Jaarmiyoota Oromoo
Next Post: በቴሌቪዥን ለሃይማኖት ተቋማት የተሰጠውን የአየር ጊዜ በተመለከተ ከአለም አቀፍ የዋቄፈና ጉባኤ የተሰጠ መግጫ